Kulan xal looga gaarayo shaqaaqadihii galbeedka Baladweyne oo ka dhacay Isla baladweyne – SBC
Kulan xal looga gaarayo shaqaaqadihii galbeedka Baladweyne oo ka dhacay Isla baladweyne
Posted by Webmaster on February 22, 2012 Comments
Kulan ay isugu yimaadeen Odayaasha iyo wax garadka gobolka Hiiraan islamarkaana ka dhacay Gudaha Magaalada Baladweyne xarunta Gobolkaas ayaa waxaa heshiis lagu kala dhex dhigay maleeshiyaad beeleed dhowaan halkaasi ku dagaalamay.
Kulankan oo maalmihii ugu dambeeyay ka soconayay magaalada Baladweyne ayaa waxaa la isugu keenay laba beel oo ku dagaalamay Galbeedka magaaladaas kuwaasi oo garab ka mid ah ay ka mid ahaayeen Maamulka dooxada shabeele .
Siyaasiyiin wax garad iyo cuqaal ka soo kala jeeda labada dhinac ayaa kulankaasi ku sugnaa iyadoona gebi ahaanba ku dhawaaqay heshiis laga gaaro xal waara waxyaabihii dhacay.
Yuusuf Axmed Xagar Dabageed oo ka mid ahaa siyaasiyiintii ka qeyb galay kulankaasi ayaa halkaasi mar uu ka jeediyay hadal sheegay in aan loo baahneyn colaad ka dhacda gobolka islamarkaana laga talaabsado hadii ay jireen uuna dhinac walba qaato talaabo horey loogu qaadayo nabadgeliyada.
Sikastaba ha ahaatee bartamihii bishii 1aad ee Sanadkan ayay aheyd markii uu dagaal u dhexeeya labadan beel ka qarxay galbeedka magaalada Baladweyne kaasi oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh.
Madaxweyna dibodhiska daldka somaaliyed maxamed xagaley says:
Dignin dignin waxaan ogadigaa dhamaan omadasomaliyed masuliinda indaldaka iyo shacbka lakudomadin waxaan kudeyniyaa madaxda dowlada oo ilahada ee amaanka eeysogaladahay iyo askarda dowlada odhacaiyo dil ogeydan omada somaliyed
Madaweynahadibodhiska soomaliya ayaasheegkay in dalka iyo dadkawa omahayen dad dacad oahay bale ooseegay in oqawadowna dalka dibodhisgisa iyo dadka oqawandowna masaaric ee bertaan hilitownaa kaladaben iyo waxbaraso lacaglahan iyo doqowda oo hilidowna misaariyad iyo ciyaalka oo hilidowna misaariyad dalka iyo dadkawa dib loodhisdona dhamaan eeyihen o madasoomaliyed ee daldka iyo dadkawa daac hanow noqda masuliinta dowlda iyo al shabab dhamaad waxan niikucodsanaa dalda iyo dadkawa badbaadiyo madaxweyna ayaa sheegay dowlada hata meelaha jogta dil iyo dhacxoogan logeysta shacaka miyaan dowldad kunoqangaraa